Izithombe Zobulili Ezingcolile Zithinta Ezempilo - I-Foundation Foundation
Ikhaya Izithombe zobulili ezingcolile zithinta impilo
Ochwepheshe bezokunakekelwa kwempilo babika ukukhuphuka okukhulu kwamazinga ezinkinga zengqondo nezokukhula kwengqondo kubantu abasha namuhla. Abantu abadala abaningi babhekene nezinkinga zempilo yezocansi futhi. Kuyiqiniso yini ukuthi izithombe zobulili ezingcolile zithinta impilo? Ucwaningo lukhombisa umthelela wokusetshenziswa okuphoqelekile kwezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi empilweni yengqondo. Lezi zimo zithinta ikakhulukazi amadoda. A Ukubuyekeza kwe-2015 ngu-Love et al. uthi
"Ngokuphathelene nokulutha kwe-intanethi, ucwaningo lwe-neuroscience lusekela ukuthi izinqubo ze-neural ezisemqoka zifana nokulutha ngokweqile."
Izindaba ezinhle ukuthi ukutakula kungenzeka. Kuyasiza uma uqonda ukuthi ubuchopho buyashintsha kanjani lapho uhlangabezana nezinto ezihlukile empilweni yakho.
Kulesi sigaba I-Foundation Reward isingeniswa ngezindlela eziningi impilo yethu ingathonywa ukusetshenziswa kwe-intanethi. Sigxila ezintweni ezingcolile ze-intanethi.
Ukusebenzisa izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kungashintsha ubuchopho futhi kuguquke umzimba womuntu. Kungabangela abantu ukuba bathuthukise ukuziphatha okubi ngokocansi kuhlanganise nokulutha. Ngokumane nje, izithombe zobulili ezingcolile zithinta impilo. Siyikhipha lezi zinkinga emakhasini alandelayo.